DEGDEG: Wasaarada caafimaadka dalka ayaa xaalkeeda laga deyrinayaa!! – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA DEGDEG: Wasaarada caafimaadka dalka ayaa xaalkeeda laga deyrinayaa!!
Xeer Ilaalinta iyo hanti-dhowrka oo ay wehliyaan laamaha ammaanka ee dowladda ayaa xiray afar sarkaal oo ka tirsan wasaarada Caafimaadka gaar ahaan waaxda maaliyadda horayna waxaa u xirnaa agaaasimaha guud iyo agaasimaha maaliyadda ee wasaarada.
Xariga iyo is qab qabsiga ayaa kusoo aadaya xilli wasaaradda caafimaadka ay aheyd iney dagaal la gasho Coronavirus oo si ba’an uga faafaya magaalada Muqdisho isla markaana galay xaafado hor leh, kuna dhacay dad aan abid dalka ka bixin, ilaa iyo haddana waxaa u geeriyooday hal qof sida ay wasaarada shaacisay.
Previous articleMadaxweynaha somaliland oo u jawaabey madax dhaqameedka soomaliland
Next articleDawlada soomaaliya oo mushaharkii ka joojisey shaqaale Hargeisa Joogey